भ्रष्टाचारबिरुद्ध खरो आवाज उठाउने चर्चित पत्रकारको ह’त्या, सबै स्तब्ध ! कसरी घट्यो यस्तो घटना — Sanchar Kendra
भ्रष्टाचारबिरुद्ध खरो आवाज उठाउने चर्चित पत्रकारको ह’त्या, सबै स्तब्ध ! कसरी घट्यो यस्तो घटना
काठमाडौं । भ्रष्टाचार उजागर गर्ने चर्चित पत्रकारको ह त्या भएको छ । यो भारतस्थित बिहार प्रदेशको समाचार हो ।
विहारको बेनीपट्टी जिल्लाका अस्पताल र नर्सिङ होमको भ्रष्टाचार उजागर गर्दै आएका स्थानीय एक पत्रकार बुद्धिनाथ झाको ह’त्या भएको हो । परिवारका सदस्यहरुले अस्पताल सञ्चालकले नै उनको ह’त्या गराएको दाबी गरेका छन् ।
मधुबनी जिल्लाको बेनीपट्टी इलाका प्रहरीका इञ्चार्ज अरविन्द कुमारले २२ वर्षीय झाको हत्या भएको पुष्टि गरेका छन् । प्रहरीका अनुसार झाको शव आधा जलेको अवस्थामा फेला परेको छ ।
उनका अनुसार ह’त्याको अनुसन्धान गर्न केही व्यक्तिलाई हिरासतमा लिइएको छ । पत्रकार झाले बीएनएन न्यून बेनीपट्टीमा काम गर्दथे । बेनीपट्टीमै घर भएका झा दुई वर्षदेखि पत्रकारीतामा रुपमा सक्रिय थिए ।
उनको अपहरणपछि ह’त्या भएको उनका दाजु त्रिलोक झाले बताएका छन् । ९ नोभेम्बरमा अ’पहरण भएको र १२ नोभेम्बरमा उनको शव फेला परेको उनले बीबीसी हिन्दीलाई जानकारी दिएका छन् ।
त्रिलोकका अनुसार बुद्धिनाथले सुरुमा क्लिनिक खोलेका थिए । त्यहाँ बाहिरबाट आएका डाक्टरहरुले स्थानीयको उपचार गर्दथे । तर स्थानीय नर्सिङ होम सन्चालकहरुले अति दुःख दिएपछि उनी क्लिनिक बन्द गर्न बाध्य भए ।
त्यसैबेलादेखि उनी पत्रकारितामा सक्रिय भएको र नर्सिङ होम तथा अस्पतालका गलत क्रियाकलापको मिडियामार्फत् उजागर गर्न सुरु गरेको परिवारका सदस्यहरुले बताएका छन् ।
उनले सरकारी निकायहरुमा पनि नर्सिङ होम, प्याथ ल्याब र अस्पतालका गलत क्रियाकलापका सूचनाहरु दिने गर्दथे । सोही सूचनाको आधारमा सरकारले बेनीपट्टी र धकजरीका १९ ल्याब र नर्सिङ होमलाई बन्द गराएको थियो ।
उनले ७ नोभेम्बरको दिन फेसबुकमा ‘खेल अब सुरु हुनेवाला छ‘।’ लेखेर पोष्ट गरेको र त्यसको दुई दिनपछि राति करिब १० बजेतिर उनको अपहरण भएको र त्यसपछि ह’त्या भएको परिवारका सदस्यहरुको दाबी छ ।